Azịza ngwa ngwa: mgbanaka Qalo Ebe a ga-azụta - BikeHike
Azịza ngwa ngwa: mgbanaka Qalo Ebe a ga-azụta
Ihe na August 22, 2021 By pịa
Walmart ọ na-ere mgbanaka QALO?
Ebee ka QALO dị?
Enso ma ọ bụ QALO ọ ka mma?
Kedu ihe eji eme mgbanaka QALO?
Ogo mgbanaka gị na nha akpụkpọ ụkwụ gị hà?
Gịnị kpatara ọtụtụ ndị ji yi akwa agbamakwụkwọ ojii?
Ndị asexuals na-eyi mgbanaka ojii?
Ị nwere ike iyi mgbanaka silicone dị ka mgbanaka njikọ aka?
Kedu ihe QALO pụtara?
Emere mgbanaka Enso na USA?
Kedu ihe mgbanaka silicone ojii pụtara?
Gịnị kpatara ndị uwe ojii ji eyi mgbanaka agbamakwụkwọ ojii?
Kedu ihe ọ pụtara mgbe nwanyị na-eyi mgbanaka na mkpịsị aka nri ya?
Gịnị bụ mgbanaka QALO?
Kedu ihe mgbanaka agbamakwụkwọ rọba pụtara?
Onye chepụtara mgbanaka silicone?
Gịnị bụ nkezi nha mgbanaka nwanyị?
GNC na-ere mgbanaka QALO?
Ị na-agbanye mgbanaka QALO ka oge na-aga?
Kedu ihe kpatara ndị mmadụ ji eji mgbanaka silicone?
Ihe mgbanaka QALO bụ eziokwu na nha?
Kedu ihe ọ pụtara mgbe nwoke yi akwa agbamakwụkwọ ojii?
Kedu ihe bụ isi mgbanaka QALO?
QALO – qalo ụmụ nwoke ojii kpochapụwo àgwà q2x silicone mgbanaka nha 10 – Walmart.com – Walmart.com.
US QALO bụ ụlọ ọrụ ọla America nke hiwere isi na Santa Ana, California. Ọ na-emepụta mgbanaka agbamakwụkwọ na nkwa nke sitere na silicone karịa ọla ọdịnala.
N'ozuzu, ebe a na-etokarị ọrụ ndị ahịa na àgwà mgbanaka maka ha abụọ, a maara Qalo maka mgbanaka ya siri ike ebe Enso na-enye ndị dị gịrịgịrị. Ụfọdụ na-ahọrọ ọdịdị nke ikpeazụ na nhọrọ ha na-acha ọla, ebe ndị ọzọ na-ahụ na mgbanaka Qalo na-adịte aka karị.
Kedu ihe bụ mgbanaka QALO emere? A na-eme QALO site na silicone kachasị mma. Nke a pụtara na mgbanaka ahụ adịchaghị enwe ike ịkpata mgbakasị ahụ ma ọ bụ ihe nfụkasị ahụ n'akpụkpọ gị karịa ọla ọdịnala. Ha ji mkpịsị aka gị gbatịa, nke pụtara na mgbanaka gị agaghị 'arapara' ọzọ.
Mgbe ọ gwara gị nha akpụkpọ ụkwụ, jiri usoro a mebere: nha akpụkpọ ụkwụ kewara 2 gbakwunyere 1.5 na-enye gị nha mgbanaka gị.
Oji nwere ike igosi ike, obi ike, ma ọ bụ ike, yana igosi nkwenye ma ọ bụ nkwenye. N'ihe gbasara alụmdi na nwunye, mgbanaka ojii nwere ike igosi ike ịhụnanya. Ịgba mgbanaka ojii nwere ike ịbụ ụzọ di na nwunye si egosi na ha raara onwe ha nye n'alụmdi na nwunye ha nakwa na ha kwenyere n'ịdị ike nke njikọ ha karịa ihe ọ bụla ọzọ.
Igbo: mgbanaka ojii bụ akara nke inwe mmekọahụ ma a na-ejikarị ya na mkpịsị aka nri etiti.
Mmetụta dị n'azụ mgbanaka njikọ aka dị mma. Ọ bụ ihe ị nwere ike na-eyi oge niile, awa 24 kwa ụbọchị, iji gosi nkwa gị na ịhụnanya gị n'ebe onye gị na ya nọ. Mana n'omume, mgbanaka njikọ aka ọdịnala adịghị enwe isi. Mana, ị nwere ike ịmegharị mgbanaka silicone kama! Jul 13, 2020
Ngosipụta ole na ole ka e mesịrị, ha rutere na silicone ọkwa ahụike 100% na QALO mụrụ - n'ụzọ nkịtị-na ebe a na-adọba ụgbọala Holiday. QALO, akpọ [KAY-LO], na-anọchi anya “Quality, Athletics, Love, Outdoor” na mbụ, ụlọ ọrụ lekwasịrị anya na-ege ntị bụ omume-egwuregwu, mgbatị ahụ na Crossfit set.
PREMIUM ENSO SILICONE RING: Enso bụ onye nrụpụta izizi nke mgbanaka agbamakwụkwọ silicone adịchaghị. Zụrụ na obi ike ịmara na a na-eme mgbanaka Enso ọ bụla na USA, na mgbanaka ọ bụla gụnyere akwụkwọ ikike ndụ.
Agba ojii Maka ụfọdụ ọ na-anọchi anya ihe dị mwute ma ọ bụ ihe na-adịghị mma, dị ka iru újú ọnwụ nke onye ha hụrụ n'anya. Maka ndị ọzọ ọ bụ akara nke ike, ike na nchekwa, ma ndị ọzọ na-ahụ ya dị ka ihe nnọchianya ebighi ebi nke ịhụnanya na ntinye aka.
Site na iyi mgbanaka agbamakwụkwọ ojii, ma ọ bụ mgbanaka emere site na silicone, eriri carbon, ma ọ bụ ihe ọzọ, bụ ụzọ ndị uwe ojii si ebelata ntị achọghị. Ọ na-ezigara ndị nwere ike izu ohi akara na ọ nweghị ihe bara uru ebe ahụ iji kwado mwakpo a na-atụghị anya ya.
Ụfọdụ kwenyere na mgbanaka a na-eyi na mkpịsị aka na-anọchi anya akụ na ụba, ọkwa, ma ọ bụ ike. Ndị ọzọ kwenyere na ha na-anọchi anya ọbụbụenyi platonic. Yi mgbanaka na mkpịsị aka nri aka nri nwekwara ike gosipụta nkwuputa onwe ya na/ma ọ bụ ogologo oge. Mgbanaka na mkpịsị aka na-emekwa ka ọ bụrụ ọmarịcha nkwupụta ejiji ma ọ bụrụ na ị bụ ụdị ịme otu!Oct 3, 2020
mgbanaka QALO bụ mgbanaka silicone dị elu emebere iji mee ka aka gị nwee obi ụtọ. Na-eguzogide mmanụ na ihe mgbaze, QALO ka emebere ka ọ pụọ mgbe etinye ya n'oké nrụgide ka mkpịsị aka gị wee nọrọ na nchekwa.
Kedu ihe bụ mgbanaka agbamakwụkwọ rọba? Ha bụ mgbanaka agbamakwụkwọ nke silicone maka ma ndị nwoke ma ndị nwanyị ma na-eyi iji gosipụta njikọ nke mmadụ abụọ na ịhụnanya.
Echiche bịara mgbe Cameron Bair, onye na-emepụta mgbanaka agbamakwụkwọ silicone mbụ, nwere nkụda mmụọ mgbe ọ na-achọsi ike iji dochie ìgwè agbamakwụkwọ agbamakwụkwọ ya dị oke ọnụ n'ihi ndụ ya. Ọ chọrọ ịmepụta mgbanaka nke dị ọnụ ala iji dochie anya, dị mma, ma nke kachasị mkpa - chebe ya.
Nkezi mgbanaka ụmụ nwanyị bụ 6 na nkezi mgbanaka ụmụ nwoke bụ 8½ Ịtụle nha mgbanaka onye gị na ya nwere nke ọma nwere ike iji obere uche mee ya. Ọ bụrụ na ị nwere obere onye mmekọ, ọ ga-abụ na aka ha dị ntakịrị na mkpịsị aka dị gịrịgịrị, yabụ gbalịa malite na nha 4 ma ọ bụ 4½ maka ụmụ nwanyị, yana gburugburu 7 maka ụmụ nwoke.
Mgbanaka Omuma nke ụmụ nwoke Qalo - Black / nha 11: mgbanaka silicone naanị maka Qalo, mgbanaka silicone a pụrụ iche na-arụ ọrụ maka ọbụna ọrụ ndị ruru unyi na gburugburu kacha sie ike. QALO, Inc.
Mgbanaka QALO nwere ihe gbatịa n'okike n'ebe ha nọ ka ha wee nwee ike ịmanye n'ụzọ dị nro n'elu mkpịsị ụkwụ na na mkpịsị aka gị. Yabụ ka oge na-aga, ọ ga-ekwe omume na ha nwere ike ịgbatị, mana anyị anụbeghị maka mgbanaka QALO ọ bụla na-ebelata.
Ọ bụghị naanị na ha na-enyere aka igbochi izu ohi, mana ha na-enyekwa aka idobe mgbanaka gị n'ọnọdụ ka mma. Mgbe ị na-eyi mgbanaka silicone, ị naghị eyi mgbanaka “ezigbo” gị ọtụtụ oge, nke pụtara na ị na-egbochi ịta na ịkwa akwa na akwa. Ha dabara nke ọma wee bịa n'ụdị agba na nha dị iche iche.
Mgbanaka QALO Classic anyị na-agba ihe dị ka ọkara nha snug. Ọ bụ ezie na mgbanaka ọ bụla emere nke Q2X ma ọ bụ mgbanaka Perforated nke egwuregwu na-agba ọsọ karịa nha. Ọmụmaatụ: nha mgbanaka ọdịnala 9 tụọ nha 9 na QALO. Mgbe ị na-eyi ọtụtụ mgbanaka nwere ike ikpokọta n'otu oge, anyị na-akwado ịhazi nha nha na-esote.
Ndị otu agbamakwụkwọ ojii dị ka nkwupụta mmetụta uche Maka ụfọdụ, mgbanaka agbamakwụkwọ ojii nwere ike igosi obi ike na ike. Ọ bụghị naanị nnọchite anya ike anụ ahụ, mana ike nke nkwenye, kwa. Ya mere, ọ "na-ekwu" ihe gbasara onye na-eyi ya.
Ezubere maka nkasi obi na nchekwa, mgbanaka QALO bụ maka aka na-arụ ọrụ. Chee echiche banyere diamond gị dị ka ikiri ụkwụ stiletto gị dị oke ọnụ yana QALO dị ka snịịka ọkacha mmasị gị.
Azịza ngwa ngwa: Ebe a ga-azụta mgbanaka Qalo
Ajụjụ: Ebee ka m nwere ike ịzụta mgbanaka Qalo
Ebe ị nwere ike ịzụta Qalo Rings
Ajụjụ: Ebe a na-ere ihe mgbanaka Qalo
Kedu ụlọ ahịa na-ere Qalo Rings
Ajụjụ: Ebe ị ga-azụta mgbanaka Qalo na ụlọ ahịa
Azịza ngwa ngwa: mgbanaka imi na-agba mgbanaka imi
Azịza ngwa ngwa: Sistemụ mgbanaka igwe kwụ otu ebe nwere ike ịnwe ihe karịrị mgbanaka abụọ
Azịza ngwa ngwa: Ebe ị ga-azụta mgbanaka Enso
Azịza ngwa ngwa: Mama mgbanaka
Previous Post: Otu esi aghọ onye na-ebuli elu
Next Post: Ebee ka m nwere ike ịzụta akpụkpọ ụkwụ Merrill